प्राधिकरणबाट हटाईएको हप्तादिन नबित्दैँ हितेन्द्रदेवले लिए भयङ्कर ठूलो एक्सन, कुलमानको कुर्सी नै पर्यो धरापमा ! – GALAXY
प्राधिकरणबाट हटाईएको हप्तादिन नबित्दैँ हितेन्द्रदेवले लिए भयङ्कर ठूलो एक्सन, कुलमानको कुर्सी नै पर्यो धरापमा !
आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्य एक्सनमा उत्रिएका छन् । आफूलाई पुनर्वहालीको माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेपछि प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ्को कुर्सी हल्लिएको छ ।
पुनर्वहालीको माग लिएर हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले रित दर्ता गराएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत मेरो अधिकार हनन भएको’ दावी गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा आफैंलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
यसअघि शाक्यकै सहमतिमा सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको दावी गरिएको थियो । शाक्यलाई सचिव सहरको सेवा सुविधा दिइ ऊर्जा आयोगमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरिएपनि उनी एकाएक सर्वोच्च गएका हुन् ।